Ngezinye izikhathi, ukuze baqonde izenzo kanye izici zokuziphatha kwabantu abaseduze nathi, okwenza sazi usuku lwabo lokuzalwa le-imeyili ukuze usizo umkhuba wokufundwa kwezinkanyezi. Phela, kuze kufike siyazi, ukuthi kuwuphawu zezinkanyezi, futhi inquma uhlamvu lomuntu. Nokho, akubona bonke uyazi ukuthi ukubukeka, futhi isiphetho izici ngamunye izinkomba ifomu uhlamvu ezintathu: indawo kwelanga ngosuku lokuzalwa, esithinta umhlaba engaphakathi ngazinye, isikhundla nenyanga, ebheka isimo kanye nokubaluleka kwe-elibusayo. Yingakho embuzweni: iyini ethemini leyengcile, lapho kufike kuthonye khona nendlela elibusayo Balisisa bebodwa?
Elibusayo (With ulimi lwesiLatini ihumusha ngokuthi "phansi-up", nge English -.. "Amandla" "ithonya," "predominance", "ukubusa") - uphawu zezinkanyezi, ekuphumeni lalingabonakali emkhathizwe okwamanje lokuzalwa. Ngamanye amazwi, okwesibili lapho besibhakabhaka esinezinkanyezi nazo zonke isikhundla kwamaplanethi, ekhumbula ukuthi okwamanje, yakha nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu siqu ngenxa obelusanda kuzalwa uhambo lwakhe ekuphileni siqu. Lena kwaba seqophelweni empambana Engxenyeni esempumalanga yaleli umkhathizwe nge indiza ye Ecliptic.
Earth iphuzu ubuso bayo ngamunye, ujikeleze nsuku iya zonke izimpawu zomgamu wezulu, ukulungisa inani elithile Zodiac elibusayo uphawu. Umuntu enikezwa uphawu Capricorn isibonelo, ngoba ukubaluleka (hhayi Sun Kunenkolelo eziningi) kuluphawu Capricorn. Ekuzalweni elibusayo ezithinta ngqo endaweni, isikhathi kanye nosuku lokuzalwa.
In izinhlelo eziningi zezinkanyezi elibusayo kuthathwa njengesibikezelo esiyiso element central futhi iphuzu reference ekwakhiweni kwendlela letime ngayo. isigxivizo saKhe esiyingqayizivele etholwe mathupha lapho ezalwa eba ingxenye ebalulekile yobuntu, lunqume yokuziphatha, uhlamvu, ukubukeka, futhi sengqondo kwabanye. Lokho kuxhomeke ke Usabela abantu, izimo, bese okubona abanye. Elibusayo, okuyinto ingabalwa ngokuzimela, ukwakha ubuntu, izici zobuntu, yokuveza imibono nesimo sengqondo salo.
Nanti iphuzu, kunokusebenza uphawu of the Moon, ukwakha cell we enganakile ukujula, ekubonisa ukuthi kukhonani phezu, isifonyo, elibonisa abantu emhlabeni. uphawu elibusayo kuyinto olwelwesini isikhumba sakho, "Mina" futhi inquma ukuthi abantu babona ini kuwe kwasekuqaleni. Elibusayo (ASC esifushanisiwe) ibizwa ngokuthi esangweni, ngemuva okuyizwe kwangaphakathi.
Ngokusho nabathwebulayo, uphawu elibusayo - esibaluleke kakhulu ishadi natal (ikhadi lokuzalwa), isikhundla okuyinto incike nezinye izici ezinkanyezini. Ngaphandle kokubala lomuntu nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu umbandela ngeke eziphelele kakhulu kuhlobene ekuzalweni.
Indlela ukucacisa elibusayo
Ukuze abale elibusayo yakho, udinga ukwazi:
Ihora, nosuku, nenyanga nonyaka lokuzalwa.
Ikuphi emkhathini lendawo lokuzalwa.
Elibusayo ngesandla ubalwa kusetshenziswa ifomula ekhethekile:
arctg (cos s / - [(TG f · sin ε) + (yesono sika · cos ε)]) = ASC, lapho
f - latitude ezindawo ka the lokuzalwa;
ε - engela nenkabazwe we Ecliptic (mayelana 23-26);
s - nesikhathi sendawo sidereal (kubalwa ngu ifomula s = S a + l + UT + d, lapho S a - isikhathi sidereal phakathi kobusuku-Greenwich Mean usuku oyifunayo (ungabona ikhalenda);
Mina - longitude;
UT - Isikhathi Somhlaba;
d - ngesikhathi ukulungiswa (UT (e amahora) * 9.86) umehluko nge kusho sidereal isikhathi welanga.
S ukubaluleka kufuneka iphindaphindwe 15 kuya siguqulwa degrees.
Ukubala kungaba isikhathi esiningi futhi akuqinisekisi ukunemba umphumela, ngakho kungcono kakhulu usizo program e-computer.
Ngaphambi kokufika kolwazi nobuchwepheshe ukunquma abantu elibusayo waphendukela izazi zezinkanyezi professional nabafundi bezinkanyezi. Okwamanje, noma ubani angaba sihlaziye ngesikhathi sokuzalwa komuntu yakho, bala elibusayo. Umuntu kumelwe amane abe nesithakazelo lezi zinkinga, kanye nokufinyelela kwezokufundwa kwezinkanyezi ayidingekile. Kukhona izinhlelo ze-computer ekhethekile evumela kwamaminithi ambalwa ukuze uthole ulwazi olufunayo mayelana uphawu yakho ekuphumeni zezinkanyezi. Uhlelo uyakwazi ukubala amafomula, hhayi kuphela inani le elibusayo, kodwa futhi nomthelela wakhona uhlamvu. Phela, uphawu ekuphumeni Zodiac inquma imigomo yakho, izinjongo kanye lokusungula, sithonye isiphetho ngisho.
Akunandaba uma ungenalo ulwazi mayelana nobude lendawo lokuzalwa. Uhlelo Professional eyonquma kuwufanele yabo kuphela ozenzayo ezifanele ikholomu izwe nedolobha (uma ekhaya lakho liya edolobhaneni elithile, faka edolobheni eliseduze), uvusa nesikhathi sendawo ngefomethi global (sase-Greenwich Mean), bese ku sidereal (isikhathi isihlobo ukuba izinkanyezi fixed) . usuku Sidereal akuyona ezifanayo emhlabeni isikhathi, kwaba yizinsuku imizuzu emine emifushane Greenwich.
Omunye hlelo, kungakhathaliseki ukuthi sici-ocebile kungenzeka, asikwazi ukukunika ulwazi olugcwele futhi ephelele mayelana degree zezinkanyezi ekuphumeni uphawu futhi indawo kwamanye amaplanethi ngesikhathi sokuzalwa. Bala elibusayo ngesikhathi usuku lokuzalwa bese uthola ishadi umnyuziki natal kungenziwa okusekelwe izinhlelo eziningi, ulwazi oluthe xaxa, noma nguchwepheshe.
Anqume elibusayo kungenzeka ngaphandle asebenzise usizo izinhlelo ezikhethekile, kodwa umane utshele isikhathi ukuphuma nokushona kwelanga ngosuku lokuzalwa kwakhe. Ebhekisela ukubala:
Uma wazalwa entathakusa ke elibusayo yakho kuvumelana ilanga uphawu zezinkanyezi. Ngokwesibonelo, uma - Aries, wena uphawu yakho ekuphumeni - Aries.
ngemuva kwamahora 2-4 kokusa ukubaluleka ihamba ngohlamvu olulodwa phambili, ngakho-ke, Aries, ukuletha injabulo ukukhanyisa ukubonakala kwakhe at 8:00 am on the uphawu ekuphumeni zezinkanyezi - Taurus.
amahora 4-6 kusukela ekuphumeni kwelanga ukuguquguquka uphawu ongowokuzalwa eminye emibili ngaphambi ezinkanyezini. Lokho Aries elibusayo - Gemini.
Uma wazalwa emini, iphuzu ekuphumeni ihamba phambili izimpawu ezintathu (Aries - Cancer).
amahora 4-6 ngaphambi kwelanga ASC yakho izoya ukuze uthole enye i izinhlamvu ezine, okusho ukuthi Aries - kuyinto Leo.
Ukubukeka ukukhanya amahora 2-4 ngaphambi kwelanga imakwe Inani elibusayo uphawu lwesithupha (Aries - Virgin).
izibalo Ngaphezu kwalokho kwenziwa ngendlela efanayo.
Ngakho, kuyacaca ukuthi njalo emahoreni 2-4 ASC ihamba cishe elilodwa uphawu phambili. Nokho, akubona bonke amaphuzu sishukumiseleka ngokulinganayo, abanye bangase ukuhambisa msinyana nofana buthaka. Ngakho-ke elibusayo libalwe isikhathi ukuphuma nokushona kwelanga kunzima ngempela ngoba iningi nokwethenjelwa kungcono ukufuna izinhlelo usizo nabafundi bezinkanyezi professional.
Effect phezu ascendent Ingaphandle
Hhayi engazi ukuthi ASC uyakwazi kuthinta ukubukeka komuntu. Nokho, singasho kugcwale umlomo ukuthi inkululeko yomuntu ubukeka kahle ngendlela sihilela elibusayo. Ngemva indima ebalulekile ekwakheni imizimba, izici zobuso nezinye izakhi yokubukeka izakhi zofuzo zifeza. izici zofuzo umzimba, kuhambisana ithonya uphawu oluthile yezinkanyezi zomgamu wezulu nalo ukunikeza umphumela wokugcina, sokunquma ukubukeka ethile.
Ngaphambi ufunde elibusayo ufunde nge incazelo indinganiso uphawu zezinkanyezi ngamunye.
Athletic, ukuphakama medium, Gait eyingqabavu, ukumamatheka evulekile, iqonde, kancane Ukubhoboza ukubukeka. Active futhi eyingqabavu izimpawu umlilo eshiwo kulesi sikhundla okuhlukumezayo wokuphila, isibindi Amazing, isinyathelo amandla elikhanyayo ayaluzayo. Hardy, eqinile, Aries siqine njalo iya phambili, kuncike awahlabi izinqumo.
Xhuma elibusayo e Taurus wanikeza umnikazi ngemvume obukhulu, umzimba oqinile, izici ambiwa, amehlo amakhulu, uhlobo square sobuso. Slow, okuthembekile ezindla isinyathelo ngasinye, abakwazisayo okunethezeka nenduduzo Taurus kuyinto ngaphansi kwesivikelo Venus, ukubeka charm yakhe izinkanuko zenyama.
Twins abe esifushane, beshesha, Imizimba mafutha, abukhali-efakiwe ubuso, ethakazelisayo, amehlo evulekile, a Gait okusheshayo. Gemini Liyindawo smart futhi ehlakaniphile, nobudlelwano futhi banobungane, abe izinkulumo mobile ebusweni. Ziyakwazi behlakaniphile, isebenziseka ngezindlela eziningi, futhi uyakwazi ukubonisa ithalente ezindaweni eziningana ngesikhathi esisodwa.
Isikhuphashe - okushiwoyo, ukucasuka, babe imvelo ngendlela emangalisayo ube nemfihlo. Abameleli beNdikimba elibusayo kuleli uphawu ngokuvamile ukuphakama medium, baye izici elithambile, uhlobo round lomuntu, ngezwi elimnene, izihlakala mncane, iminwe nezinyawo. Isikhuphashe - nihlakazeke, Ungadliwa, nemvelo ebucayi, bayakwazisa ekhaya nomndeni, kunzima ukuthola contact nabantu ongabazi, kodwa ukwazi ukuthi lokuxhaphaza ukuziphatha kwabanye.
Elibusayo Leo futhi ukubukeka libhekene eziveza ngokubabazekayo, ukuma amahle ekhanda, ukumamatheka nekhazimulayo, ikhanda obukhulu izinwele. Lions siyaziqhenya kakhulu, lisebenza futhi uhluthuke, baye liphinyiselwe amakhono yenhlangano kanye nobuholi. Sun ukusekelwa unika Lions isibindi, isibindi, ukuzethemba.
Isibonakaliso lesithupha zezinkanyezi - Virgo - kuyinto yokuphakama okusezingeni eliphezulu noma ophansi, Imizimba ebuthaka, izici ahlukile, olukhuni, bahlole. I ukubusa Mercury endowed Ntombazane ingqondo kohlaziyo, ngezinga eliphezulu observation, lifuna bona ngokwabo kanye nabanye. Virgin olinganiselayo, a ngobala kancane bese ngikhetha.
Elibusayo e Libra uphakamisa sibalo eyakhiwe kahle, waphetha bobunjwa, nekhazimulayo, ukumamatheka emangalisayo ebukekayo, mncane, izici sculpted ebusweni. Ukuncelisa Venus endows bale ubuhle uphawu, ugazi, epholile. Libra - ozalwa osomaqhinga kanye aesthetes. Ngo umzamo ukufeza ngokuvumelana, kukhona ngezinye izikhathi kakhulu impela engazethembi futhi zihlakazeke.
Scorpios abe umthethosisekelo eqinile, amehlo aphumele ngaphandle izici zobuso, ukubhoboza, amehlo okuyiluthayo. Ezahlukene yensimbi amandla, uhlamvu ezinzima, ukuzimisela ngokuphelele nges'bindi. Bawenza ngasese, nokusola labo abazokwazi ukweqisa.
Abameleli beNdikimba uphawu liphakama Sagittarius unayo i umzimba lokugijima encane izici, emnandi ebusweni, friendly, ukubukeka kancane quizzical, ukuthambekela akhuluphele. Sagittarians akhayo, friendly, Nomfutho, ngobuqotho, abathanda ukuhamba. Ziyakwazi ngezinye izikhathi untule ikhono lokungacasuli, ishaya emhloleni, kodwa ngaso sonke isikhathi nokukhulumisana ngokukhululekile.
Capricorn kuyahluka ubude, mncane, ezijulile, amehlo ukucabangela, ukumomotheka imisebe, eqinile, imilenze eziqinile. Ithonya Saturn kwenza Capricorn wokuvelela, beziphakamisa othambekele ukucindezeleka nokucindezeleka. Ubizwa isiyalo, onokwethenjelwa futhi ugxile umsebenzi namandla.
Elibusayo e Aquarius unika abanikazi uphawu enamandla, izici muscled futhi ambiwa, amehlo ucabangisisa. Aquarius nobudlelwano, kancane ome njengeqanda, has uyosisebenzisa ngendlela engaphezu kwevamile yokucabanga, uhlamvu ezingalindelekile.
Okulingene noma ongaphakeme ukukhula, amehlo amakhulu Ungadliwa, enhle, hair obukhulu, izandla esikhulu izinyawo ukuhlukanisa izinhlanzi ezivela iqoqo abameleli ezinkanyezini. Fish bangakwazi ukubona izinto kusengaphambili, umcabango athuthukile, uhlobo "otherworldly". Ubathola omanqikanqika, ukuvilapha, onezimfihlo futhi kunikeze umuzwa wabantu kancane nevilaphayo. Nakuba empeleni lokhu akuhlali.
Ababhula Ngezinkanyezi bakholelwa ukuthi elibusayo ukubala kubaluleke kakhulu ngoba umuntu. Ngemva kokwazi uphawu yakho ekuphumeni kuzovumela ngijwayele kwebalingisi ephelele kunayo ubuntu bakho, lokusungula kanye izici ezingaba nomthelela isiphetho ngibenze ngokoqobo ngokwengeziwe.